လပေါ်ရှိလူလုပ်အရာဝတ္ထုများ - ဝီကီပီးဒီးယား
လကမ္ဘာပေါ်မှ လူသားတို့ပြုလုပ်သည့်အရာဝတ္ထုစာရင်းသည် လမျက်နှာပြင်ပေါ်မှ လူလုပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါဇယားသည် Retroreflector များ၊ Apollo Lunar Surface Experiment Package သို့မဟုတ် အပိုလိုအာကာသယာဉ်မှူးများ ချန်ထားခဲ့သော ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့တွင် အလန် ရှာပတ်၏ ဂေါက်သီးဘောလုံးလေးများ၊ အလံ၊ ကျရှုံးလေသောအပိုလို ၁၅ ယာဉ်အဖွဲ့သားများ၏ ရုပ်ထုများ အစရှိသည်ဖြင့် ဖြစ်ကြသည်။ စေတန်-ဗွီ ဒုံးပျံမှ တတိယအဆင့် လက်ကျန် S-IVB သည် လမျက်နှာပြင်ပေါ် ချန်ရစ်ခဲ့သည့် အလေးလံဆုံးသော အရာဝတ္ထုပင်ဖြစ်သည်။ လူသားတို့သည် အရာဝတ္ထုကီလိုဂရမ်ပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ကို လပေါ်တွင်ထားရစ်ခဲ့ပြီး လမြေသား ၃၈၂ကီလိုဂရမ်ကို အပိုလိုနှင့် လူနာခရီးစဉ်များတွင် ကမ္ဘာသို့ သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ အသုံးပြုနိုင်သေးသော တစ်ခုတည်းသော လူလုပ်ပစ္စည်းမှာ အပိုလို ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅ အာကာသယာဉ်မှူးများနှင့် လူနော်ခေါ့ ၁၊ လူနော်ခေါ့ ၂ မက်ရှင်မှ ချန်ထားခဲ့သည့် လူလုပ်ပစ္စည်းများပင် ဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုများသည် လကမ္ဘာ၏ဟိုဘက်အခြမ်း (ကမ္ဘာမြေမှ ဘယ်တော့မှမမြင်ရသည့် အခြမ်း) တွင် တည်ရှိကုန်ကြပြီး ရိန်းဂျား ၄၊ လူနာလပတ်ယာဉ် ၁၊ လူနာလပတ်ယာဉ် ၂ နှင့် လူနာလပတ်ယာဉ် ၃ တို့ဖြစ်ကြသည်။
လူနာ-၂ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၅၉ ၃၉၀.၂ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 29°06′N 0°00′E﻿ / ﻿29.1°N -0°E﻿ / 29.1; -0 
အမေရိကန် ၁၉၆၂ ၃၃၁ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 15°30′S 130°42′W﻿ / ﻿15.5°S 130.7°W﻿ / -15.5; -130.7 
အမေရိကန် ၁၉၆၄ ၃၈၁ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 9°21′29″N 21°28′48″E﻿ / ﻿9.358°N 21.480°E﻿ / 9.358; 21.480 
အမေရိကန် ၁၉၆၄ ၃၆၅.၇ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 10°38′S 20°36′W﻿ / ﻿10.63°S 20.60°W﻿ / -10.63; -20.60 
လူနာ ၅ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၅ ၁၄၇၄ တိုက်ပြီးပျက်စီး 8°N 23°W﻿ / ﻿8°N 23°W﻿ / 8; -23 
လူနာ ၇ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၅ ၁၅၀၄ တိုက်ပြီးပျက်စီး 9°48′N 47°48′W﻿ / ﻿9.8°N 47.8°W﻿ / 9.8; -47.8 
လူနာ ၈ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၅ ၁၅၅၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး 9°06′N 63°18′W﻿ / ﻿9.1°N 63.3°W﻿ / 9.1; -63.3 
အမေရိကန် ၁၉၆၅ ၃၆၇ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 2°38′17″N 24°47′13″E﻿ / ﻿2.638°N 24.787°E﻿ / 2.638; 24.787 
အမေရိကန် ၁၉၆၅ ၃၆၇ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 12°49′41″S 2°23′13″W﻿ / ﻿12.828°S 2.387°W﻿ / -12.828; -2.387 
လူနာ ၉ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၆ ၁၅၈၀ ဆင်းသက် 7°05′N 64°22′W﻿ / ﻿7.08°N 64.37°W﻿ / 7.08; -64.37 
လူနာ ၁၀ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၆ ၁၆၀၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး
လူနာ ၁၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၆ ၁၆၄၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး ? 
လူနာ ၁၂ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၆ ၁၆၇၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး ? 
လူနာ ၁၃ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၆ ၁၇၀၀ ဆင်းသက် 18°52′N 62°03′W﻿ / ﻿18.87°N 62.05°W﻿ / 18.87; -62.05 
အမေရိကန် ၁၉၆၆ ၂၇၀ ဆင်းသက် 2°28′26″S 43°20′20″W﻿ / ﻿2.474°S 43.339°W﻿ / -2.474; -43.339  LROC page
အမေရိကန် ၁၉၆၆ ၃၈၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်) 6°42′N 162°00′E﻿ / ﻿6.70°N 162°E﻿ / 6.70; 162 
အမေရိကန် ၁၉၆၆ ၂၉၉၂ တိုက်ပြီးပျက်စီး 5°30′S 12°00′W﻿ / ﻿5.5°S 12°W﻿ / -5.5; -12 
အမေရိကန် ၁၉၆၆ ၃၈၅ တိုက်ပြီးပျက်စီး
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်) 3°00′N 119°00′E﻿ / ﻿3.0°N 119°E﻿ / 3.0; 119 
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်) 14°18′N 97°42′W﻿ / ﻿14.3°N 97.7°W﻿ / 14.3; -97.7 
အမေရိကန် ၁၉၆၇ ၂၈၁ ဆင်းသက် 3°00′54″S 23°25′05″W﻿ / ﻿3.015°S 23.418°W﻿ / -3.015; -23.418  LROC page
အမေရိကန် ၁၉၆၇ ၃၈၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
အမေရိကန် ၁၉၆၇ ၂၈၃ တိုက်ပြီးပျက်စီး 0°24′N 1°20′W﻿ / ﻿0.4°N 1.33°W﻿ / 0.4; -1.33 
အိတ်စပလိုးရား ၃၅ (IMP-E)
အမေရိကန် ၁၉၆၇ ၁၀၄.၃ တိုက်ပြီးပျက်စီး ? 
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်) 3°S 83°W﻿ / ﻿3°S 83°W﻿ / -3; -83 
အမေရိကန် ၁၉၆၇ ၂၈၁ ဆင်းသက် 1°27′40″N 23°11′42″E﻿ / ﻿1.461°N 23.195°E﻿ / 1.461; 23.195  LROC page
အမေရိကန် ၁၉၆၇ ၂၈၂ ဆင်းသက် 0°29′N 1°24′W﻿ / ﻿0.49°N 1.40°W﻿ / 0.49; -1.40  LROC page
အမေရိကန် ၁၉၆၇ ၂၉၀ ဆင်းသက် 40°52′S 11°28′W﻿ / ﻿40.86°S 11.47°W﻿ / -40.86; -11.47 
လူနာ ၁၄ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ၁၉၆၈ ၁၆၇၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး ? 
အပိုလို ၁၀ LM (Snoopy) လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၆၉ ၂၂၁၁ တိုက်ပြီးပျက်စီး ? 
လူနာ ၁၅ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၆၉ ၂၇၁၈ တိုက်ပြီးပျက်စီး ? 
အပိုလို ၁၁ LM-5 (Eagle) လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၆၉ ၂၀၃၄ ဆင်းသက် 0°40′27″N 23°28′23″E﻿ / ﻿0.6741°N 23.4730°E﻿ / 0.6741; 23.4730  LROC page
အပိုလို ၁၁ LM ascent stage
အမေရိကန် ၁၉၆၉ ၂၁၈၄ တိုက်ပြီးပျက်စီး
အပိုလို ၁၂ LM-6 (Intrepid) လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၆၉ ၂၂၁၁ ဆင်းသက် 3°00′45″S 23°25′18″W﻿ / ﻿3.0124°S 23.4216°W﻿ / -3.0124; -23.4216  LROC page
အပိုလို ၁၂ LM လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၆၉ ၂၁၆၄ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 3°56′S 21°12′W﻿ / ﻿3.94°S 21.20°W﻿ / -3.94; -21.20 
လူနာ ၁၆ လဆင်းယာဉ် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၀ < ၅၇၂၇ ဆင်းသက် 0°41′S 56°18′E﻿ / ﻿0.68°S 56.3°E﻿ / -0.68; 56.3 
လူနာ ၁၇ & လူနိုခေါဒ် ၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၀ ၅၆၀၀ ဆင်းသက် 38°17′N 35°00′W﻿ / ﻿38.28°N 35.0°W﻿ / 38.28; -35.0 
အပိုလို ၁၃ (S-IVB-508)
အမေရိကန် ၁၉၇၀ ၁၃၄၅၄ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 2°45′S 27°52′W﻿ / ﻿2.75°S 27.86°W﻿ / -2.75; -27.86 
လူနာ ၁၈ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၁ ၅၆၀၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး 3°34′N 56°30′E﻿ / ﻿3.57°N 56.5°E﻿ / 3.57; 56.5 
လူနာ ၁၉ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၁ ၅၆၀၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး ? 
အပိုလို ၁၄ S-IVB (S-IVB-509)
အမေရိကန် ၁၉၇၁ ၁၄၀၁၆ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 8°05′S 26°01′W﻿ / ﻿8.09°S 26.02°W﻿ / -8.09; -26.02 LROC page
အပိုလို ၁၄ LM-8 (Antares) လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၇၁ ၂၁၄၄ ဆင်းသက် 3°38′43″S 17°28′17″W﻿ / ﻿3.6453°S 17.4714°W﻿ / -3.6453; -17.4714
အပိုလို ၁၄ LM-8 လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၇၁ ၂၁၃၂ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 3°25′S 19°40′W﻿ / ﻿3.42°S 19.67°W﻿ / -3.42; -19.67
အပိုလို ၁၅ S-IVB (S-IVB-510)
အမေရိကန် ၁၉၇၁ ၁၄၀၃၆ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 1°31′S 11°49′W﻿ / ﻿1.51°S 11.81°W﻿ / -1.51; -11.81
အပိုလို ၁၅ LM-10 (Falcon) လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၇၁ ၂၈၀၉ ဆင်းသက် 26°07′56″N 3°38′02″E﻿ / ﻿26.1322°N 3.6339°E﻿ / 26.1322; 3.6339
အပိုလို ၁၅ လူနာရိုဗာ
အမေရိကန် ၁၉၇၁ ၄၆၂ ဆင်းသက် 26°05′N 3°40′E﻿ / ﻿26.08°N 3.66°E﻿ / 26.08; 3.66
အပိုလို ၁၅ LM-10 လဆင်း (Falcon) ယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၇၁ ၂၁၃၂ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 26°22′N 0°15′E﻿ / ﻿26.36°N 0.25°E﻿ / 26.36; 0.25
အပိုလို ၁၅ ဂြိုဟ်တုခွဲ
အမေရိကန် ၁၉၇၁ ၃၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
လူနာ ၂၀ လဆင်းယာဉ် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၂ < ၅၇၂၇ ဆင်းသက် 3°34′N 56°30′E﻿ / ﻿3.57°N 56.5°E﻿ / 3.57; 56.5 LROC page
အပိုလို ၁၆ S-IVB (S-IVB-511)
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၁၄၀၀၂ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 1°18′N 23°48′W﻿ / ﻿1.3°N 23.8°W﻿ / 1.3; -23.8
အပိုလို ၁၆ LM-11 (Orion) လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၂၇၆၅ ဆင်းသက် 8°58′23″S 15°30′01″E﻿ / ﻿8.9730°S 15.5002°E﻿ / -8.9730; 15.5002
အပိုလို ၁၆ လူနာရိုဗာ
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၄၆၂ ဆင်းသက် 8°58′S 15°31′E﻿ / ﻿8.97°S 15.51°E﻿ / -8.97; 15.51
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၂၁၃၈ တိုက်ပြီးပျက်စီး
အပိုလို ၁၆ ဂြိုဟ်တုခွဲ
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၃၆ တိုက်ပြီးပျက်စီး
အပိုလို ၁၇ S-IVB (S-IVB-512)
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၁၃၉၆၀ ဝင်တိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည် 4°13′S 12°19′W﻿ / ﻿4.21°S 12.31°W﻿ / -4.21; -12.31
အပိုလို ၁၇ LM-12 (Challenger) လဆင်းယာဉ်
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၂၇၉၈ ဆင်းသက် 20°11′27″N 30°46′18″E﻿ / ﻿20.1908°N 30.7717°E﻿ / 20.1908; 30.7717 LROC page
အပိုလို ၁၇ လူနာရိုဗာ
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၄၆၂ ဆင်းသက် 20°10′N 30°46′E﻿ / ﻿20.17°N 30.77°E﻿ / 20.17; 30.77
အမေရိကန် ၁၉၇၂ ၂၁၅၀ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 19°58′N 30°30′E﻿ / ﻿19.96°N 30.50°E﻿ / 19.96; 30.50
လူနာ ၂၁ & လူနိုခေါ့ဒ် ၂ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၃ ၄၈၅၀ ဆင်းသက် 25°51′N 30°27′E﻿ / ﻿25.85°N 30.45°E﻿ / 25.85; 30.45
အိတ်စ်ပလိုးရား ၄၉ (RAE-B)
အမေရိကန် ၁၉၇၃ ၃၂၈ တိုက်ပြီးပျက်စီး ?
လူနာ ၂၂ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၄ ၄၀၀၀ တိုက်ပြီးပျက်စီး ?
လူနာ ၂၃ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၄ ၅၆၀၀ ဆင်းသက် ~12.75ºN, ~62.2ºE LROC page
လူနာ ၂၄ လဆင်းယာဉ် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၁၉၇၆ < ၅၈၀၀ ဆင်းသက် 12°45′N 62°12′E﻿ / ﻿12.75°N 62.2°E﻿ / 12.75; 62.2 LROC page
Hagoromo / ဟီတန် 
ဂျပန် ၁၉၉၀ ၁၂ တိုက်ပြီးပျက်စီး
ဂျပန် ၁၉၉၃ ၁၄၃ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 34°18′S 55°36′E﻿ / ﻿34.3°S 55.6°E﻿ / -34.3; 55.6
အမေရိကန် ၁၉၉၈ ၁၂၆ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 87°42′S 42°21′E﻿ / ﻿87.7°S 42.35°E﻿ / -87.7; 42.35
အီးယူ ၂၀၀၆ ၃၀၇ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 34°14′S 46°12′W﻿ / ﻿34.24°S 46.2°W﻿ / -34.24; -46.2
လဆောင့်ယာဉ် (MIP) / ချန်ဒရာယန်-၁
အိန္ဒိယ ၂၀၀၈ ၃၅ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 89°S 30°W﻿ / ﻿89°S 30°W﻿ / -89; -30
ဆလင်း Rstar (အိုကီနာ) ဂျပန် ၂၀၀၉ ၅၃ တိုက်ပြီးပျက်စီး 28°12′47″N 159°01′59″W﻿ / ﻿28.213°N 159.033°W﻿ / 28.213; -159.033
တရုတ်ပြည် ၂၀၀၉ 2000 Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 1°30′S 52°22′E﻿ / ﻿1.50°S 52.36°E﻿ / -1.50; 52.36
အိန္ဒိယ ၂၀၀၉ ၁,၃၈၀ ခရီးစဉ်အတွင်းပျက်စီး ?
ဆလင်း (ကာဂူယာ) ပင်မလပတ်ယာဉ် ဂျပန် ၂၀၀၉ ၁၉၈၄ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 65°30′S 80°30′E﻿ / ﻿65.5°S 80.5°E﻿ / -65.5; 80.5
LCROSS Shepherding အာကာသယာဉ်
အမေရိကန် ၂၀၀၉ ၇၀၀ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 84°43′44″S 49°21′36″W﻿ / ﻿84.729°S 49.36°W﻿ / -84.729; -49.36,
အမေရိကန် ၂၀၀၉ ၂၂၇၀ Intent.
တိုက်ပြီးပျက်စီး 84°40′30″S 48°43′30″W﻿ / ﻿84.675°S 48.725°W﻿ / -84.675; -48.725,
အမေရိကန် ၂၀၁၂ ၁၃၂.၆ တိုက်ပြီးပျက်စီးCrashed
(ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်) 75°37′N 26°38′W﻿ / ﻿75.62°N 26.63°W﻿ / 75.62; -26.63
ခန့်မှန်းထုထည် (ကီလိုဂရမ်) ၁၇၈,၇၉၆
ဆင်းသက်နေရာအချို့အား ပြသထားသည့် လမြေပုံ (အကြီးချဲ့ရန်နှိပ်ပါ)
Alan Bean ရိုက်ကူးခဲ့သော လပေါ်ရှိ Surveyor3ပုံ
Clementine အာကာသယာဉ်မှ ရိုက်ကူးထားသော လူလုပ်ပစ္စည်းများ၏ တည်နေရာ
Retro Reflector Experiment တည်နေရာ
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 2။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 4။ 2010-12-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 6။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 7။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 5။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 7။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 8။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 8။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Ranger 9။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 9။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂.၀၀ ၁၂.၀၁ ၁၂.၀၂ ၁၂.၀၃ ၁၂.၀၄ ၁၂.၀၅ ၁၂.၀၆ ၁၂.၀၇ ၁၂.၀၈ ၁၂.၀၉ ၁၂.၁၀ ၁၂.၁၁ Spacecraft was in lunar orbit but is assumed to have decayed from orbit and crashed into the moon, location unknown.
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 10။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 11။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 12။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 13။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 1။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 1။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 2။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 2။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 3။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 3။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 4။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 4။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Explorer 35 (IMP-E)။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Orbiter 5။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 5။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 6။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Surveyor 7။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 14။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 10 LM(Snoopy) descent stage။ 2010-12-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 15။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 11 LM descent stage။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၅.၀ ၃၅.၁ ၃၅.၂ ၃၅.၃ ၃၅.၄ ၃၅.၅ The ascent stage of Apollo 10 was commanded to fire its engine, left lunar orbit and entered solar orbit. The ascent stage of အပိုလို ၁၁ was left in orbit and thereafter its orbit decayed and it crashed onto the moon at an unknown location. The Apollo 16 ascent stage failed to crash onto moon when commanded and it decayed from orbit atalater date and also crashed at an unknown location. The ascent stages of the remaining successful missions (Apollo 12, 14, 15, and 17) were each deliberately crashed onto the moon. Apollo 13's complete Apollo Lunar Module re-entered Earth's atmosphere after having served asalifeboat during the aborted mission.
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 11 LM ascent stage။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 12 LM descent stage။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 12 LM ascent stage။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၉.၀ ၃၉.၁ ၃၉.၂ Luna program sample return mission; mass listed is for both ascent and descent stages, though only the descent stage was left on the moon.
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 16 descent stage။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 17/Lunokhod 1။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 13 S-IVB။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 18။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 19။ 2010-12-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 14 SIVB။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 14 LM descent stage။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 14 LM ascent stage။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 15 SIVB။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 15 LM descent stage။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 15 LM ascent stage။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 15 subsatellite။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 20။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 16 S-IVB။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 16 descent stage။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 16 ascent stage။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 16 Subsatellite။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 17 S-IVB။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 17 descent stage။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Apollo 17 ascent stage။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 21/Lunokhod 2။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Explorer 49/RAE-B။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 22။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 23။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Luna 24။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Hagoromo/Hiten Orbiter။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Hiten။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Lunar Prospector။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ University of Texas Engineering News - Lunar Prospector Impact Location Estimate။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - SMART 1။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Moon Impact Probe / Chandrayaan 1။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Frontline India's National Magazine - Moon Mystery - Moon Impact Probe impact coordinates။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ JAXA Press Release (PDF) (in Japanese)။ JAXA (2009-02-18)။ 2009-02-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Okina (Rstar) - Kaguya။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ JAXA 18 February 2009 SELENE status - Okina (Rstar) impact estimate position - (page3in Japanese translated with Babelfish)။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၉.၀ ၇၉.၁ Upcoming International Missions to the Moon (PPT)။ NASA (2007-01-11)။ 2009-04-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ / cf. 2.3t with fuel (Spacecrafts launched in 2007။ 2009-04-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။)
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Chang'e 1။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ China People's Daily Online,2March 2009 - Chang'e-1 impacts moon (coordinates)။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - Chandrayaan 1။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ JAXA HOT TOPICS။ JAXA (2009-06-11)။ 2009-06-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - KAGUYA (SELENE)။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ JAXA Selenological & Engineering Explorer - KAGUYA (SELENE) impact coordinates။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Guide to Seeing the LCROSS Lunar Impact။ 2009-10-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - LCROSS Shepherding Spacecraft။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog - LCROSS Centaur။ 2011-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA Probes Prepare for Mission-Ending Moon Impact။ 2012-12-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လပေါ်ရှိလူလုပ်အရာဝတ္ထုများ&oldid=504726" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၂၀:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။